အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးစာအုပ်ရေးသားခဲ့သူ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
bre • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဥစ္စာ၏ပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်သင့်ဂီတအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်. သငျသညျဈတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုငါ့ထံသို့ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုများမှာ 17 ဘုရားသခင်အဘို့မီးပေါ်မှာနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်လှောက်. သင့်ရဲ့ဂီတငါ့ကိုရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်, နှင့်ဈစာအုပ်တွေငါ့ကိုကောင်းစွာအဖြစ်ကြီးထွားစေပြီလည်းသဘောတူ. စာဖတ်ခြင်းဟာမင်းအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စား.
Humdaddy • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယခုပင်လျှင်ပထမဦးဆုံးအခနျးတှငျဖတျရှု, ကြွင်းသောအရာဖတ်ရှုဖို့မစောင့်နိုင်. သင့်ရဲ့ဂီတကိုအမြဲငါ့ကိုရန်အားပေးစကားခဲ့ငါစာအုပ်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုယုံ!